Robhoti, Drones, Autonomous mota dzichaumba Tourism kwete muJamaica chete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Robhoti, Drones, Autonomous mota dzichaumba Tourism kwete muJamaica chete
Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota rezveKushanya kubva kuJamaica pamwe nekunze kwebhokisi maonero epasi rose, Hon, Edmund Bartlett anogovera pfungwa yake nezvehungwaru hwekunyepedzera nekubatana kwevanhu - robhoti mune ramangwana nyika yekufamba nekushanya. Kwete chete Jamaica inozopindura kune chatbots.
Gurukota reJamaica rezveVashanyi Hon. Edmund Bartlett nhasi aendesa hurukuro dzake ku CANTO Yegore Virtual Musangano.
Gurukota rakaona kuti pasina mubvunzo, kukanganisika kuri kwese kwakakonzerwa nedenda reCOVID-19 kwakabatsira zvakanyanya kukurumidza kumhanyisa kwekuchinja kwedhijitari.
Bartlett akagumisa achiti: Maitiro aya anodzidzisa ese mabhizinesi ekushanya, madiki, madiki, ari pakati nepakati uye akakura, kutsvaga nzira dzekugamuchira matekinoroji edhijitari, nekuvandudza zvivakwa zvemadhijitari kana kusangana nenjodzi yekusiiwa.
Minister Bartlett vakagovana pfungwa dzavo uye nhaurwa dzekutaura muCANTO Panel pamwe eTurboNews:
Kwese pasirese, kugamuchirwa kwekugara-pamba uye kushanda- kubva-kumba mirairo, kuvharwa kwemuganhu uye mamwe matanho akasimba enharaunda ekugadzirisa denda, kwakanganisa maitiro echinyakare nemaitiro; zvichikonzera hurumende huru, kutengeserana uye zviitiko zvine chekuita nebasa kutamisirwa kudhijitari.
Mukuita uku, hunhu hwevagadziri vemitemo, masangano uye kunyangwe nhengo dzeveruzhinji kuenda kune tekinoroji yedhijitari hwachinja kubva mukusahadzika, kusava nechokwadi uye kupokana kuenda mukubvuma kwakasimba kuti tekinoroji yedhijitari ikozvino inoita chinonyanya kukosha mukusimudzira magariro pamwe nehupfumi.
Zvakakosha, denda ratidzidzisa kuti masangano anotadza kubudirira kuisa matekinoroji edhijitari mumabhizinesi avo mamodheru angangotadza mukuda kwavo kuona kuchinjika, kugona uye kukwikwidza munguva yepashure-COVID-19.
Iko kugona kwevatambi munharaunda yepasirese yekushanya kuenderana nemhedzisiro yedenda iri pasina mubvunzo kuri kubatsirwa nematekinoroji edhijitari.
Ben & Jerry's Israel kurambana kunodhura ...
Mutsva Inotevera-Chizvarwa COVID-19 Vaccine